Manje umbala izinwele ngaphandle ammonia akumangalisi. Lilonke nje ubuchwepheshe ezahlukene amafutha kancane kancane esikhundleni bendabuko, sekuqede amehlo indlela. Ammonia - elinesihluku elilalisa chemical kuhlaselwa izinwele ekhanda. Le into, ukuze engena ijule nigibelise esikalini. Ngakho, ngemva ammoniacal izinwele ukudaya kusho elise ezingaphili ngamathiphu posechennymi, buphelile. Izinwele udayi Iphalethi 'Auliya' iluphi okuzoxoxwa ngalo ngezansi, isebenza ngendlela bahluke. Kuyinto 60% amafutha. Baye 'kwaphoqa "udayi enhliziyweni izinwele ukuqinisekisa umbala nokuyingozi shiny izinwele impilo.
Izinwele udayi 'Auliya': umthengi Izibuyekezo
Ubuchwepheshe Amafutha Delivery System (umbala lokuthumela amafutha) - hhayi kuphela engilakhele isithunzi sobukhulu upende Garnier Olia. Labo abaye bazama ukubona ngeso lengqondo ukuthi umphumela wawo, bathi ke ilungele ukusetshenziswa ekhaya. Manje asikho isidingo ukuxhumana Umdwebo ingaphakathi. Ukuxuba tube kapende nge nokokuyifaka-umthuthukisi, uthola into alube esiwela imicu hhayi eligeleza akukho izigaxa. Iphakheji sihlanganisa ibhodlela namafutha-conditioner "Usilika futhi kukhanye". Amalungu laphawula intengo yeningi kwaleli thuluzi: ruble 180 kuya 265. Ukuvikela kanye nokunika imicu elithambile, eligeleza curls - konke ongakwenza, "Auliya 'izinwele wemvelo. Palette imikhiqizo kulolu chungechunge, "Garnier" umelwe e 25 shades. Kodwa kungakhathaliseki ukuthi bamnyama noma ukhetha, ungaqiniseka ukuthi ngisho kwempunga ezingxabanweni kakhulu uzobe zaveza baphelela, futhi ithoni uzobuyisa amandla ayo isikhathi eside.
Kuyini ibhalansi umbala esinalo
Ngakho, "Auliya 'izinwele wemvelo. Palette imibala ke wehlukile kakhulu. Ngamunye amathoni 25 zihlelwe zaba 10 imibala eyisisekelo: kusuka 1 (abamnyama) kuya ku-10 (ezimhlophe). Ngemva idijithi yokuqala futhi amaphuzu ithoni esiqokiwe (1 kuya ku-6). Ephakeme inomboro, sisondelene kangakanani obomvu, ephansi - empunga. Waba yini umphumela wesibindi staining kuncike kakhulu ku umbala yokuqala izinwele zakho - zemvelo noma atholwe. Khetha umbala wakho nge amakamelo elilodwa noma amabili alula noma mnyama. Ngokwesibonelo, uma ukukhanya esinsundu (7), khona-ke uzakubonisisa asondele izinombolo 8 no-9 bebheke siphungule, kanye 6 no-5 ku utemnyayuschuyu. Ngaphezu kwalokho, esekelwe isici wena tsvetotipa, ucosha ithoni. "Auliya" - izinwele umbala, Palette ophakamisa 6 umbala ezicashile - ungakwenza. Uma lesi sibalo esikhulu isethelwe 0, lena ithoni main. Figure 1 abandayo kakhulu, grey umthunzi, 3 - Staphylococcus, 5 - uthulisiwe obomvu kanye 6 - umlilo.
"Auliya 'izinwele umbala: grey Iphalethi
ubumpunga kudinga indlela ekhethekile. Hhayi kunomvuzo ukuze upende amathoni obomvu, ngoba umphumela ungase akudumaza. Futhi, ngeke ufune ezimhlophe olukhulu. Painted abamnyama, uzoba nenkinga nge izimpande ezikhulayo. Khetha upende phakathi palette umbala. Ikakhulukazi uveza angaphezu kwempunga izinwele esinsundu (anemibala ehlukene), futhi ezimhlophe amnyama. "Garnier" imikhiqizo nazo ezithakazelisayo ukuthi kungadingeki ukugeza imoto. Vele uthele izinwele amanzi kancane futhi ngobumnene uhlikihla imicu yakho. Painting froth futhi emihle, ehlanzekile izinwele zakho bese sezinwele.
Shampoo "Ekoderm": ukubuyekezwa, ukwakheka kanye indlela yokusetshenziswa
Ukulahlekelwa izinwele: indlela yokuvimbela ekhaya. Imikhiqizo yokuvimbela izimonyo nezinwele
Iprotheyini ekhuphuka egazini: izimbangela. Ukuhlaziywa kwegazi ngamakhemikhali. Ingqikithi yamaprotheni
Capital iminikelo - ukuthunyelwa. inhlokodolobha olubhalisiwe 1c
Sisal - kuyini? Indlela yokwenza yezandla kusukela sisal? Bast, sisal ubuhlalu
Indlela ukudayisa imoto ngokushesha futhi inzuzo